SIDA LOO AASO-AADANKU SOO IIBSADAY SANDUUQ: XULASHADA IYO BEERISTA GEEDO - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo abuuro geedo geedo ka soo baxay sanduuq
Dad badan ayaa caadeystey in ay iibsadaan geedo of ubax leh xididdada furan iyo muddo dheer afkoda. Dhawaanna waxa ay u muuqatay in tuubooyinka kaararka lagu iibiyo oo nuqulo kooban la soo koobay, kuwa beeralayda ubaxa ah ayaa walaac leh. Waxaa jira fikrad ah in geedo kuwaasi ay leeyihiin fursad yar oo xidid ah sababtoo ah xididdada aad u adag iyo sprouts. Xaqiiqdii, ubaxu wuxuu u dhintaa sababo aan habbooneyn oo la beero. Sida loo abuuro shubanku ku iibsaday sanduuq, taas oo ay tahay in ay tixgeliso nooca daryeelka ee loo baahan yahay dhaqanka - waxaanu ku tilmaamaynaa wax kasta oo ka dambeeya maqaalkan.
Tijaabada caadiga ah ee taxadar leh ee nidaamka iyo nidaamka xididka, taas oo fure u ah iibsiga guul ah ee seedling kasta, kiiskan ma shaqeeyo. Sanduuqa waxaad ka heli doontaa Rose ah oo leh caleemaha si adag u gaaban iyo xididdada, kuwaas oo ku duuban ee polyetylen madow.
Si aad u aragto xaaladda xididdada dukaanka ama xarumaha beerta waa mid aan suura gal ahayn. Ka dib oo dhan, walxaha beeraha laga saaro lama ogola. Haa, iyo ka-saarista khaldan ee seedling ka tubbada kaliya isaga waxyeello.
Waa muhiim! Sidaa daraadeed soo iibsashada gogol ee sanduuq ma noqonayso niyadjab, dooro geedo leh dhawr dhibco oo xoog leh, taas oo ay jirto jir caafimaad leh oo adag oo midabka cagaaran, sidoo kale waxaa jira burooyin dhowr ah. Aad bay u fiicantahay haddii cawska geela lagu daboolo wax ama shamac.
Si taxadar leh u akhri macluumaadka ku yaal baakadka. Beeralayda khibrad leh waxaa lagula talinayaa in ay siiyaan mudnaanta kumbiyuutarrada, sababtoo ah waxay si fudud u la qabsadaan xayawaanka iyo xaaladaha cimilada ee aagga diirran, horumariyaan si fiican iyo u-barbardhiga.
Sidoo kale geedo caan ah oo la cadeeyay ee noocyada koonfurta ee wax soo saarka gudaha ama Holland.
Xasuuso in sawirada muuqaalkoodu aad u fiican yahay oo ay ku jiraan quruxda quruxda aan caadi ahayn ee xirmooyinka badanaa laftigooda maaha mid si toos ah u sabab ah maaddaama aan la taaban karin oo aan la taaban karin ee tuubada.
Sidaa darteed, ha ka waaban inaad eegto qaybta la heli karo ee sheyga. U fiirso fiiro gaar ah qoorta aasaasiga ah ee seedling. Waa inay noqotaa lebis oo aan ka badnayn 8 mm mugga.
Qaar ka mid ah iibsadaha ayaa si qalad ah u aaminsan in geedo leh caleemaha dhaadheer isla markiiba dhali doonaa ka dib markii rooting ah. Dhab ahaan, xaaladaha sida, sida caadiga ah, ma noolaan.
Tani waxay dhacdaa sababtoo ah way daciifsan yihiin, oo ay sabab u tahay muddada dheer ee xaaladaha diiran ee aan lahayn nalalka lagama maarmaanka ah waxay kordhiyeen caleemo khafiif ah oo aan caan ahayn.
Ma taqaanaa? Boqorad Cleopatra oo ah masraxa Masaarida ayaa sidoo kale hoos u dhistay taariikhda iyadoo ah taageere qiiro leh oo ah qaboobaha. Munaasabad balaadhan oo ay ka qaybgashadeeda ku qaban waydo iyada oo aan lahayn ubaxyo qurux badan. Xayawaankooda, oo amarro u ah Queenska, ayaa si wayn u garaacday hareeraha hoolalka kubbadaha. Xaalado gaar ah, dabaqyadaas waxay gaadheen nus mitir dherer ahaan. Tabbashooyinka Rose ayaa ku riixaya mawjadaha had iyo jeer waxay la socdaan Cleopatra iyada oo lugta ku socota.
Sida loo badbaadiyo kahor intaan la dhicin
Khubarada ayaa tixgelinaya muddada laga soo bilaabo tobanka sano ee labaad ee Abriil ilaa maalinta koowaad ee bisha May inay noqoto waqtiga ugu fiicneyn ee lagu aaso geedo la helo. Waqtigaan, dhulku wuxuu si xoog leh u kululaa, kuleylka xasilloonna dib ayuu u soo baxaa.
Inta badan sanduuqyada sanduuqa ku yaal muuqaalka iibka dhammaadka February, sidaas darteed waxaan fahmi doonaa si faahfaahsan sida loo badbaadiyo ka hor beerashada.
Xulashada ugu horeysa waa in si gooni ah u joojiso horumarinta dhalidda. Si loo dhammeeyo, waxaa la geeyaa hal bil oo qaboojiyaha, balakoonka ama curiyaha aan kuleylka lahayn. Xiritaan ilaa xilliga beerto, waa in la siiyo dhirta dhowr maalmood si ay uga baxdo isbeddelka qasabka ah.
Hab kale oo loogu talagalay kuwa daryeelaya kuwa aan caajis u lahayn geedo prikopat ama ku beeran dheriga gudaha ee gudaha. Ka hor inta this, waxaa lagugula talinayaa in la baadho xididada, ka saar dhammaan qaybaha waxyeellada leh oo iyaga loola dhaqmo kiciyaasha kobaca. Khabiiradu waxay kugula talinayaan yareynta xididada dheer. Qoob-shuban ka soo tubbada ka dib markii la beero waxay u baahan yihiin si ay u daboosho xirmada iyo ku dul dhigo balakoonka ama veranda. Heerka xilligaas waa mid ujeedo leh, maxaa yeelay ubaxku si wayn ayuu u kobcin doonaa ka hor inta aanuu noqonin meel joogto ah oo aan laga yaabo inuu ka badbaado dhibaatadaas.
Ma taqaanaa? Dadka Muslimiinta ah aad bay uga taxaddaraan duurka. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, ubaxyadaas waxaa loo tixgeliyaa hadiyadda Alle, sidaas darteed qofna looma oggola inuu tallaabo ka soo baxo dhirta leexatay.
Halkee ay ku beeri dhufanayasaa
Boorashka laga bilaabo sanduuqyada waxaa la fuliyaa oo kaliya guga. Ka dib marka aad iibsato seedling waxaad leedahay waqti aad ku go'aansato doorashada xulashada saxda ah. Isla mar ahaantaana, qaababka ciidda ee ciidda waxaa lagu xisaabtamayaa, iyo sidoo kale daboolka ah ee goobta. Aynu falanqee faahfaahinta.
Roses aad u jecel qorraxda iyo hooska qayb ahaan iftiin. Xaaladahaas oo kale, waxaa la siiyaa ubax badan iyo caraf udgoon. Haddii baadiyaha u kacda sababo macquul ah si ay u ahaato hooska buuxa, waxay si weyn uga dambeyn doontaa koritaanka, waxay si weyn u faafin doontaa oo waxay joojin kartaa ubaxu. Sidaa daraadeed, si aad u degto boqoradda beerta, dooro goobo fiican oo iftiin leh oo aan jirin wax qorshe ah iyo dabayl qabow oo qabow. Iska ilaali qabow qabow, sababtoo ah waxay u muuqdaan inay ururiyaan hawo qabow, dhalo iyo biyo roob.
Sidaa darteed in-aadanku ee sanduuqa ayaa si fiican u rujin iyo aad ku faraxsan yihiin ubax leh, si dhab ah u qaada midabada of substrate ee degaanka la doortay. Waa inay ahaataa mid tayo sare leh oo nafaqo leh, tan iyo nidaamka xididka ee duurka u baxaa gudaha.
Waa muhiim! Meelaha ay tahay in la soo saaro qaabab soo-shub ah, heerarka dhulka hoose waa inuusan kudhicin dusha sare 1 m.
Ubaxa wuxuu si fudud ugu kobcin doonaa subagga nafaqada leh, iftiin, substrates. Haddii xayawaan ama sanduuq aan ku habbooneyn ay ku adkaadaan ubaxa, waxaa fiican in aan tijaabin warshadda oo aan helno meel kale oo ku habboon oo loogu talagalay.
Xirfadlayaasha waxay kugula talinayaan in ay hagaajiyaan qaabka ciidda iyadoo la isku darayo isku dar ah. Waxay ka kooban tahay qaybo isku mid ah peat, sod dhul, humus ama compost, ash qoryo, ciid webiga.
Si loo hagaajiyo iftiinka midabka burooyinkeeda, khubarada ayaa kugula talinaya in lagu daro dhoobo yaryar, taas oo jiilaalka qaboobta oo la qalajiyey ka dib qorraxda xagaaga. Haddii ay jiraan dhul dhoobo ah oo sariirta ubaxa, waxaa lagu saxi karaa iyadoo lagu darayo ciid webiga, peat iyo humus. Sidoo kale ha ilaawin inaad hubiso astaamaha dhulka. Guriga, tani waxaa la sameeyaa iyadoo la adeegsanayo khaladaad joogto ah.
Liquid waxaa loo xoqay godka substrate ee laga soo qaaday qoto dheer 20 cm. Xajiyo soo noqnoqda iyo dareemid waxay muujinayaan bay'ad alkalineed. Roses door bidaan in ay ku koraan deegaan daciif ah.
Sidaa darteed, waxaa suurtagal ah in ay ciidda ku diiriyaan peat, ash alwaax ama burka dolomite. Laakiin substrates xoog leh acidic waxaa la alkalized leh lime, boodhka sibidhka ama malab caadiga ah caadiga ah.
Waa muhiim! Roses beeray dheriyo, ku dhowaad muddada transplanting ilaa meel joogto ah, waxaa lagula talinayaa in la dhigo waddada loogu talagalay adkeynta iyo la qabsashada xaaladaha daran.
Sida loo abuuro qaboojinta sanduuq
Ka hor intaadan dhoobada ka soo bixin sanduuqa si joogto ah, waxaad u baahan doontaa inaad qabato shaqo diyaarin ah. Waxay khuseeyaan labada goobood ee la doortay, iyo qalabka dhulka. Waanu fahmi doonaa waxkasta si isku mid ah.
Haddii ubaxu sugayay beeritaanka qaboojiyaha, guga waxaad u baahan tahay inaad ka saarto filimka isaga oo si taxadar leh u eegaya geeddi-socodka xididka. Dhammaan qaybaha dhintay iyo waxyeellada waa in la gooyaa. Ka dibna samee xididada "Emistim", "Kornevin", "Ekosilom", "Heteroauxin" ama "Appin". Tan waxaa loo sameeyaa si loo kiciyo hormoonnada koritaanka dhirta. Sidoo kale, jeermiska ka mid ah xididdada leh diyaarinta "Maxim", xal of permulsion caadiga ah ama copper sulfate ma ka hortagi doonaa.
Bannaanka u badani waxay soo jeedinayaan, dhammaadka dhammaan manipulations, si ay u daadiyaan wada jir ah ee duurka a mash dhoobo ku salaysan xal of Doodwanaag. Xaaladda markii ay kor u kacday sanduuqii waxaa la dhajiyay dherigii mudo ah, waxay ku jirtay dhammaan nidaamyada diyaarinta ee loo baahan yahay horaantii, sidaa daraadeed hadda waxay u baahan tahay keliya waraabin badan. Beeraha qaarkood waxay ku talinayaan in ay ku daraan xalalka kicinta kicinta ee dareeraha.
Ma taqaanaa? Dagaalyahannadii Roomaanku waxay u sujuudeen buro soo noqnoqda ah waxayna muddo dheer u adeegsadeen ubaxyo loogu talagalay oo kaliya loogu talagalay guusha. Sifooyinkan ayaa loo aqoonsaday calaamadaha geesinimada iyo geesinimada. Askari kasta oo caadi ah ayaa ku riyooday inuu ku beddelo koofiyada biraha oo leh ubaxyo casaan ah.
Ka dib markii aad ku guulaysatay in aad qaboojinta ka soo baxdo sanduuqa ilaa guga, waxaad bilaabi kartaa iyaga beerista beerta. Si arrintan loo sameeyo, samee nidaamka xididka ku haboon ee godka baadiyaha. Khubarada waxay ku talinayaan qoditaanka daloolka 50 cm qoto dheer iyo ballaaran.
Haddii xaafadda ku yaala iibkaagu uu korayo ubax, dib uga soo noqosho galka hal mitir ah. Marka laga hadlayo noocyo yar-yar, masaafadaas waxaa lagu dhimi karaa 30 cm.
Qeybta hoose ee daloolka dillaacsan ayaa dhigaya lakabka ah dheecaan. Wixii fiilada ku habboon ee loo yaqaan "chamite", chips lebbiska ama qashinka caadiga ah. Nidaamkani wuxuu leeyahay meel gaar ah oo ka mid ah dusha miisaanka culus.
Ka dibna ku dar walxaha ciidda diyaarka ah ee laga helo peat, ciidda webiga, sodan iyo humus. Waxaa sidoo kale waa suurad wacan in lagu daro laba qaado oo ah sulfate potassium ama superphosphate in ay substrate ah. Ka dib markii falalka wax lagu sameeyo ee ceelka, waxaad hoos u dhigi kartaa sapling. Ha ilaawin inaad si toos ah iyo biyo u toosiso xididdadiisa. Markaasaa waxaa la ruxruxay dhulka. Iyada oo ku xiran nooca dhaqanka waxaa lagu go'aamiyey heerka diidmada qoorta xidid ee seedling.
Haddii aan ka hadleyno floribunda, dhirta yaryar ee loo yaqaan 'chorelibunda', oo ah meel ku wareegsan jirkooda oo xididkoodu yahay 3 cm.
Waa muhiim! On maalmaha qoraxda, saplings dhalinyarada in maalmaha ugu horeeya ka dib markii laga beerto waa pritenyat. Tani waxay ka caawineysaa inay si dhaqso ah u la qabsadaan oo ayan u adkeyn xooggooda halganka noolaanshaha.
Haddii aan ka hadleyno saamiga dheriga, beeritaanka waxaa sameeya sida caadiga ah ee dib loogu soo celiyo tuber dhir. Xaaladdan oo kale, xididdada waa in aan la nadiifin ka soo substrate, iyo laamaha waa in aan laga saaro paraffin. Wakiilku wuxuu ka ilaaliyaa dhirta inuu qalajiyo oo uu gacan ka geysto koritaanka degdegga ee kelyaha.
Marxaladda ugu dambeeya ee beerto, dalaggu wuxuu u baahan yahay in la waraabiyo marlabaadna mar labaad. Kuwa soo socda ayaa lagula talinayaa sida humus: jilif alwaax, humus, balka wax kasta, marka laga reebo dhirta cagaarka ah. Kadib markaa dareenka qaar waa in la siiyaa caws. Beereyaal khibrad leh ayaa lagula talinayaa in ay iyaga jarjaraan iyagoo jarjaraya afargeeso 20 cm, iska hubi in ay jiraan 2-3 burooyinkooda on biqil kasta.
Daryeelka kaddib "Queen of Flowers"
Iyadoo hufnaanta guul leh ee qaboobaha ee sanduuqyada ma kala duwan daryeelka ee shuruudaha gaarka ah. Wixii horumarin buuxda ee quudinta ugu muhiimsan ee waqtigeeda, qoyaan, diyaarinta jiilaalka, tallaabooyin ka hortag ah si looga hortago cudurada iyo cayayaanka. Dhammaan nidaamyada waxaa loo sameeyaa sida caadiga ah, sida "boqoradda kale" ee beerta.
Ha sariirta pereuvlazhnyayte, sababtoo ah waxay la qabtaa infakshanka putrefactive iyo burburinta duurka. Mycelium fungal waxaa badanaa lagu soo boodaa jawi qoyan, iyo cayayaanka waxyeellada lehna waxay ku nool yihiin deegaanka.
Waa muhiim! Goolasha casaanku waxay u nugul yahiin qorraxda qorraxda, sidaas daraadeed si dhakhso ah ayey u lumiyaan racfaankooda. Sidaa darteed, nuqulo noocan oo kale ah ayaa si fiican loogu meeleeyaa penumbra.
Ha u ogolaan dhirta cawska ku jilciya beerta ubaxa. Halkaan waxan ka hadleyno qosolka. Xaqiiqdii, cagaarshow ma aha oo kaliya in la garaaco muuqaalka qolkaada, laakiin qaado nafaqooyinka ka soo bixinta. In dagaalka ka dhanka ah tartamayaasha sida daciifiyey ay duurka u dhintaan. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad si joogto ah u dabciso ciidda si ay xididada duurka u helaan helitaanka ogsijiinta.
Ka dib markaad nadiifiso nidaamyada iyo dabacsanaanta ceelasha, hubso inaad aamusnid. Tani waxay u adeegi doontaa caqabadda cawska iyo qoyaanka qoyaanka.
Xoortay ubaxyada ubaxu waxay u baahan yihiin hagaajin. Waxay u baahan yihiin inay ka tagaan caws ubax dhexe, ka soo saareen dhinaca. Iyo sidoo kale in laga saaro burooyin yaraaday.
Calaamadaha ugu horreeya ee waxqabadka muhiimka ah, cayayaanka waa in lagu daaweeyaa wixii cayayaan ah ("Aktellik", "Aktara", "Bi - 58 New").
Haddii ay dhacdo in laga adkaado dhufaysyada leh fungal, bakteeriyada ama cudurada viral, fungicides waxay iman doontaa badbaadada (Maxim, Fufanon, Skor, Fundazol, Quadris). Xilliga jiilaalka, qaybta dhulka hoostiisa ee dhirta waxaa lagu jarjaray peat, humus ama caleemo dhacday.
Haddii aad sameyso wax kasta sida ku xusan talooyinka kor ku xusan, xayawaanka la soo iibsaday sanduuqa ayaa si guul leh u qaadan doona xididada waxayna kugu farxi doonaan inliyada inflorescences sanado badan. Sidaa darteed, ha ka baqin xirmooyin waaweyn iyo warar ku saabsan heerka badbaadada saboolka ah ee tijaabooyinka noocan ah. Iska ilaali khaladaadka caanka ah ee floriculture oo aad ku guuleysan doonto.